Lisitry ny lisitra marketing amin'ny mailaka amin'ny fialantsasatra
Alatsinainy, Aogositra 20, 2012 Sabotsy, Oktobra 25, 2014 Tempolin'i Lavon
Fahalavoana izay midika fa efa miverina am-piomanana ny fiverenana miverina mianatra ary efa an-dàlana hiverina an-dakilasy ny mpianatra. Na izany aza,
Fotoana. Tandremo fa na dia volana aogositra aza dia efa maro ny olona no mijery ny hevitra fanomezana. Raha hitan'izy ireo amin'ny vidiny mety izany dia mandeha mividy izy ireo alohan'ny lalao. Apetraho amin'ny alàlan'ny mailaka mpihaino sy asa tanana ny mailakao hisamborana ireo mpividy ireo. Mazava ho azy, ny sasany amin'ireo daty lehibe tianao hiomanana dia ny Zoma Mainty sy ny Alatsinain'ny Cyber, saingy tokony hanome lanja ireo mpamandrika ianao mandritra ny fialantsasatra.
Modely fialantsasatra. Manodidina ny fialantsasatra dia iray amin'ireo fotoana izay ny ankamaroan'ny mpivarotra mailaka dia afaka mivoaka avy ao anaty boaty ary manampy flare fialantsasatra kely amin'ny maodelin'izy ireo. Ny famoronana fanampiny dia azo inoana fa hampirisika ny mpamandrika hiditra sy hividy.
Fifanarahana sy manokana. Mandefasa fampahatsiahivana ho an'ireo mpanjifa anao satria manomboka manakaiky kokoa ny fialantsasatra. Ampidiro ny tapakila na manokana momba ny fanomezana mety ho an'ny mpianakavy, ny namana ary na ny mpampianatra ankizy aza. Ireo mpanjifa dia hankasitraka fa nanao ny asa ho azy ireo ianao ary nanome azy ireo hevitra vitsivitsy.
Mobile. Nisy fiakarana lehibe teo amin'ny habetsahan'ny olona nividy tamin'ny alàlan'ny findainy nandritra ny fialantsasatra tamin'ity taona ity. Amin'ity taona ity dia ilaina ny tiana hanatsarana ny tranokalanao ho an'ny finday. Azonao atao ny manome antoka fa mora ho an'ny mpamandrika ny mivezivezy sy mampiasa. Raha tsy izany dia hiala izy ireo ary hahita mpifaninana hividy azy ireo.
Mahazoa fiaraha-monina. Manantena aho fa efa mampiditra rohy sosialy amin'ny mailakao ianao. Na izany aza, manodidina ny fialantsasatra dia mbola ilaina kokoa ny manampy ireo sy mampiseho azy ireo! Tena nihataka tokoa i Pinterest tamin'ity taona ity ary betsaka ny olona manintona azy. Raha misy ny orinasanao any, azonao atao ny mitarika ny mpamandrika amin'ny mombamomba anao hahita ny vokatra amin'ny fahitana sy ny fividianana.
Ity dia torohevitra vitsivitsy fotsiny hanombohana hampihatra amin'ny drafitra mailaka fialantsasatrao. Inona ireo torohevitra hafa henonao momba azy ary mieritreritra ny hanampy ny fanentanana mailaka fialantsasatrao?
Tags: efahafialan-tsasatralisitra fialan-tsasatraFivarotana finday sy tabletteSocial Media MarketingSpecialsmôdelyfotoana
Lavon Temple no manam-pahaizana momba ny haino aman-jery nomerika ao BLASTmedia, famolavolana drafi-pifandraisana ho an'ny mpanjifan'ny orinasa amin'ny raharaham-barotra izay mamaritra ny tanjona, ny paikady ary ny tetika.
Hafainganan'ny votoatin'ny marika Perfection Versus
Aug 20, 2012 amin'ny 10: 14 AM
Uh-oh… efa tonga ve ny fotoana hanombohana ny fandaminana? 🙂